Baarlamaanka Norway oo isku raacay mamnuucista guurka ilma adeerada/Abtiga. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Baarlamaanka Norway oo isku raacay mamnuucista guurka ilma adeerada/Abtiga.
Sadexda xisbi ee Ap, Frp iyo Sp ayaa maanta isku waafaqay gudbinta sharci dhawaan la horgeyn doono baarlamaanka Norway, kaas oo ku saabsan in la mamnuuco guurka dhexmarada labada qof ee ilmo adeerka ama ilma abtiga isku ah. Sadexdan xisbi isku dar baarlamaanka Norway ku leh ayaa tiro aqlabiyad xildhibaano ah oo ay ku meelmarin karaan sharcigan.
Xisbiga Høyre oo markii hore taageersanaa soo jeedeyntan, ayaa arrimo farsamo darteed maanta u sheegay inay kasoo horjeedsadeen xeerkan ay sadexda xisbi rabaan inay baarlamaaanka u gudbiyaan.
Labada xisbi ee Frp iyp Ap ayaa hada isku heysta qaadashada sharafta xeerkan la gudbiyay. Frp ayaa aaminsan in qorshaha lagu gudbiyay sharcigan uu ahaa mid ay iyagu ka danbeeyeen, halka Ap ay iyagu dhinacooda ka sheegayaan guusha gudbinta sharcigan.
Booliska Norway ayaa horey u codsaday in la mamnuuco guurka dhexmara dadka ilmo adeerada ah ama ilmo abtiga ah, si looga hortago arrimo ay kamid yihiin guurka qasabka ah, dadka si sharci darada ah Norway lagu keeno iyo arrimo kale. Halkan kasii akhri.
Xigasho/kilde: Stortingsflertall forbyr søskenbarnekteskap.
Previous articleSkien: 16 sano kadib, ayaa hooyadan soomaalida iyo caruurteeda lagu amray inay Norway ka baxaan.
Next articleNorway: 270 qof oo 24-tii saac ugu danbeysay laga helay Corona.